america(america) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अमेरिकामा महँगी ४ दशकयताकै उच्च, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मको मूल्य आकाशियो
काठमाण्डौ। खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्यमा भएको उछालले अमेरिकाको मुद्रास्फीति दर सन् १९८१ अर्थात ४० वर्षपछिकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। मे महिनामा अमेरिकाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर ८.६ प्रतिशत पुगेको छ। जीवनयापनको बढ्दो लागतका कारण अमेरिकी घरेलु क्षेत्र संकुचित भएकाले नीति निर्माताकर्ताहरुलाई मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणमा ल्याउन दबाब...
चीनलाई पछि पार्दै अमेरिका बन्यो भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार
काठमाण्डौ । चीनलाई उछिन्दै अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको छ। यसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बन्दै गएको प्रमाण भएको बताइएको छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अमेरिका र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०२०–२१ मा ८०.५१ अर्ब डलर रहेकोमा २०२१–२२ मा बढेर ११९ अर्ब डलर पुगेको छ। सन् २०२१–२२ मा...
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी आउनसक्ने चेतावनी
काठमाण्डौ । जर्मन बैंक ड्युसले फेडरल रिजर्भका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक मन्दी आउने चेतावनी दिएको छ। केही महिनाअघि अमेरिकामा आर्थिक मन्दीको पूर्वानुमान गर्ने ड्युस पहिलो बैंक हो। तथापि बैंकले त्यतिबेला सामान्य मन्दीको मात्रै पूर्वानुमान गरेका थियो। बैंकका अनुसार मुख्य समस्या भनेको जब मुद्रास्फीति चरम अवस्थामा...
बाइडेनको यो कदमले कच्चा तेलको मूल्य घट्ला ? सस्तो होला पेट्रोल र डिजेल ?
काठमाण्डौ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निकै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले देशको पेट्रोलियम भण्डारबाट ठूलो मात्रामा कच्चा तेल निकाल्ने बताएका छन्। यसले कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ब्लुमबर्गको समाचारअनुसार बाइडेनको सरकारले...
रुसमाथि प्रतिबन्ध बढाउने तयारीमा अमेरिका, अब कुन–कुन क्षेत्र बन्नेछन् निशाना ?
काठमाण्डौ । अमेरिकाका उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दलीप सिंहले अमेरिकाले रुसमाथिको प्रतिबन्ध अझै लम्ब्याउन सक्ने र रुसको अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने बताएका छन् । सीबीएससँगको एक अन्तर्वार्तामा दलीप सिंहले रुस आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेको बताए। ‘रुस सन् १९८० को दशकको सोभियत जीवनस्तरमा द्रुतगतिमा बढिरहेको छ’, उनले भने। रुसले जारी...
अमेरिकामा महँगी ४ दशकयताकै उच्च
काठमाण्डौ । अमेरिकामा महँगी ४ दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिसँग जुझ्नका लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले सन् २०१८ पश्चात् पहिलोपटक ब्याजदर बढाएको छ। यो वर्ष हुने ६ वटा ब्याजदर वृद्धिमध्ये पहिलो चरणमा ०.२५ प्रतिशत ब्याज बढाइएको जनाइएको छ। अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धले आर्थिक...
रुसले लगायो अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि प्रतिबन्ध
काठमाण्डौ । रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। युरोपेली संघ र ब्रिटेनले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्ध सार्वजनिक गरेकै दिन रुसी प्रतिबन्धबारे खबर बाहिर आएको हो। रुसी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी गराएको छ। रुसले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगै अमेरिकी विदेशमन्त्री...
अमेरिकामा तेलको भाउ बढ्नुमा को जिम्मेवार ?
काठमाण्डौ। रुस–युक्रेन युद्ध चर्किंदै गएपछि अमेरिकामा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो साता पेट्रोलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको छ। युक्रेन संकटअघि नै कोरोना महामारीका कारण अमेरिकामा तेलको मूल्य बढिरहेको थियो। तर, अहिले झनै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी रेडियो र टीभी च्यानलहरुमा रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरु ऊर्जा नीतिका...
अमेरिका र बेलायतले लगाए रुसी तेलमा प्रतिबन्ध, ईयूले के गर्ला ?
काठमाण्डौ । युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा अमेरिका र बेलायतले रुसबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो कदमले ‘रुसको अर्थतन्त्रको धेरै महत्वपूर्ण भाग’ लाई नोक्सानी पुर्याउने बताइएको छ। तेल र ग्यास निर्यात रुसी अर्थव्यवस्थाका लागि राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत हो। तर, यो कदमले रुससँगै पश्चिमी...
रुसमाथि दबाब बढाउने तयारीमा अमेरिका, तेल आयात रोक्न सहयोगी राष्ट्रहरुसँग वार्ता गर्ने
काठमाण्डौ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसबाट तेल र प्राकृतिक ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरुबीच वार्ता भइरहेको बताएका छन्। सीएनएनसँगको कुराकानीमा आइतबार अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनका अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो दिन यस विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक...
यो वर्षका लागि अमेरिकाको एच–१बी भिसामा पर्याप्त आवेदन पर्यो
काठमाण्डौ । अमेरिकाले आर्थिक वर्ष २०२२ लाई तोकिएको ६५ हजार एच–१बी भिसाका लागि पर्याप्त आवेदन परेको जनाएको छ। एच–१बी भिसा गैरआप्रवासी भिसा हो। जसले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई प्रविधिमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विशेष कार्यहरुका लागि विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिन्छ। टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले विभिन्न देशबाट प्रत्येक वर्ष हजारौँ...
चट्याङको नयाँ विश्व कीर्तिमान, अन्तरिक्षबाट देखिएको यस्तो दृश्य
काठमाण्डौ । अमेरिकाको दक्षिणी राज्यहरुमा आकाशबाट ७६७ किलोमिटर टाढा चट्याङ परेपछि मानिसहरु आतंकित भएका थिए। अमेरिकाका ३ राज्यमा देखापरेको यो चट्याङले अहिले विश्वका सबै रेकर्ड तोडेको छ। यो बिजुली स्ट्राइकलाई ’मेगा फ्ल्यास’ नाम दिइने भएको छ। सन् २०२० अप्रिल २९ मा यो चट्याङ परेको थियो। तर, अब यसलाई अन्तरिक्ष प्रविधिको सहयोगमा...
कोभिडका कारण ऋणमा चुर्लुम्म डुब्यो अमेरिका, जनतालाई बढ्ने भयो करको बोझ
काठमाण्डौ । कोभिड महामरीका कारण विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रिय ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। अमेरिकाकै टे«जरी डाटाअनुसार हाल राष्ट्रिय ऋण ३० ट्रिलियन डलर पुगेको छ। यो ऋणको ब्याज तिर्नमात्रै अमेरिकले वार्षिक ५ ट्रिलियन डलर खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। कोभिडकै कारण यस्तो ऋण २ वर्षमा ७ ट्रिलियनले बढेको छ। अमेरिकाका प्रान्तीय...
यी कारणले भारत भ्रमणमा नजान आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाको चेतावनी
काठमाण्डौ । अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई भारत भ्रमणमा नजान चेतावनी दिएको छ। कोभिडको बढ्दो प्रकोप, बलात्कारका घटना र जम्मु–कश्मीरमा बढिरहेको आतंकवाद गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकी प्रशासनले आफ्ना नागरिकलाई भारत भ्रमणमा नजान चेतावनी दिएको हो। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले भारतमा बढ्दो कोभिड संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै...